Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Inyanga Yokuziqhenya Esabekayo: Umbhali / Umqondisi / Isishoshovu u-ND Johnson
by Waylon Jordan June 10, 2021 1,073 ukubukwa
Umenzi wamafilimu wase-Atlanta u-ND Johnson izinto eziningi kakhulu. Umbhali nomqondisi we-black transem ngokungafihli lutho wangimangaza njengoba babehlala phansi baxoxe nami kwirekhodi leNyanga Yokuziqhenya Kakhulu ye-Horror 2021.
Ezingxoxiswaneni eziningi, ikakhulukazi uma kungumuntu onemisebenzi engamazi kahle, kunohlobo lwesigaba sokwazi lapho uluhlobo oluthile lokuzwana. Hhayi nge-ND.
"Bengicabanga ngombono wokuba yisibindi njengokuzikhethela," kusho uJohnson. “Abantu bathi, 'Hawu ukhethe ukuzikhalela. Ukhethe ukuba yisitabane; ukhethe ukuba yilokhu noma lokhuya. ' Ngicabanga ukuthi kwenziwa ukhetho. Angicabangi ukuthi ngakhetha ukuba yilokho engiyikho noma ukuthi ngingubani, kepha ngakhetha injabulo yami. Ngakhetha ukuvuka ekuseni ngibheke ukuthi ngifuna ukubukeka kanjani nokuthi ngizizwe kanjani ukuthi ngifuna ukuzizwa kanjani futhi ngibe yilokho ebengifuna ukuba yikho futhi bengingeke ngivumele imibono yabanye abantu noma izahlulelo noma izimo zezenhlalo zinqume ukuthi yini engiyenzayo ' ngizoba ngowami. ”
"Iphupho laseMelika lakhelwe kulokho," baqhubeka. “Shintsha noma ufe, futhi ngikhetha ukufa. Bulala ukuvumelana kimi. Akusizi muntu. Angicabangi nokuthi kusiza abantu abaqondile, noma kunjalo. Ngizizwa sengathi ngiqondile, noma isidingo sokunamathela kulo mqondo wokuqondile, sibulale imiphakathi. Ibulale izizukulwane eziphelele zabantu. Angingeni lapho. ”
Kwakungaleso sikhathi, ngangazi ukuthi sasizoba nengxoxo eyodwa ethembeke kakhulu onyakeni, futhi ngangikulungele ngokuphelele lokho.
Manje, wonke umlandeli owesabekayo unesikhashana, imvamisa efilimini, lokho kubenze baba ngabalandeli be-horror. Yilokho ukwethusa kokuqala; okokuqala lapho ukubanda kwehla ngomgogodla wakho futhi uzwe okuthile okufana nengozi.
Kulokhu uJohnson ufana nathi sonke, futhi umenzi wefilimu ukhumbule izikhathi ezimbalwa ebuntwaneni bakhe bokuqala lapho ezwa lokho kuqubuka kokuqala. Uyashesha ukuveza, noma kunjalo, ukuthi akazange angabaze ukuthi uphephile, ikakhulukazi ngenxa kamama.
“Ngiyakhumbula ngibuka Indandatho lapho ngineminyaka eyisikhombisa noma ngaphezulu, ”uJohnson wangitshela. “Nganginovalo lokuthi le ntombazane yayizophuma ku-TV futhi ingithathe futhi umama angibheke bese ethi, 'Uma ingena kule ndlu, ithole isikhafu sikamama * esingalungile.' Futhi ngangazi ukuthi ngaleso sikhathi umama wayezongivikela ngazo zonke izindlela. Ngangazi ukuthi ngikahle, ngaleso sikhathi. Njengokuthi, uma efika kwami, wenze iphutha. ”
Ngemuva kwesikhashana, uJohnson wabona eyokuqala Halloween okokuqala, futhi kahle… kungenzeka ukuthi badinga isiqiniseko esithe xaxa.
Kumenzi wefilimu wesikhathi esizayo, kwakungekhona kuphela ukuthi uMichael Myers wayengakwazi ukufa noma isibindi enza ngaso ukubulala kwakhe. Ngokungafani nabantu besikhathi sakhe abanjengoFreddy Krueger, uMyers wayengumbulali othule ecupha inyamazane yakhe futhi ondla amaphupho amabi ayezolandela ukubuka kokuqala kukaJohnson.
"Yingakho ngithanda ukwethuka," kusho yena. “Ngicabanga ukuthi ukwethuka kuyindlela enhle yokuhlaziya ukwesaba nokushiyeka, kodwa futhi nathi… ukuqhosha kungahle kungabi yigama elifanele, kodwa sizibandakanya kakhulu kithina. I-Horror idala indawo lapho ungabeka khona lezo zinto. Ungababuka futhi uhlaziye. Ubuntu bumnyama. Njengokuthi, hhayi nje kuphela ukuthi ubuntu benza izinto ezimnyama, kodwa abantu benza izinto ezimnyama ngempela. Kunzima ukukuqonda lokho empeleni. Ngakho uhlobo lusivumela ukuba sihlole lezo zinto. ”
Ngesikhathi uJohnson ekhula kwase kuyisikhathi sokuqala ukuthatha izinqumo ngekusasa. Ingane eyazibiza ngemidlalo yaseshashalazini, amehlo ayo ayethe njo ekubeni ngumbhali wemidlalo futhi ebhala umculo, kodwa wayenenkinga eyodwa. Imibono yakhe eminingi ibibukeka inkulu kakhulu ukuba ingagijinywa. Yize esafuna ukubhala izingoma zomculo nokusebenza e-theatre, kube nokuguquguquka okungenakuphikwa kwifilimu okwakhuluma naye futhi kungekudala wayesendleleni eya e-University of North Texas eDenton eyofunda.
Lapho eqeda iziqu zakhe, wanquma ukuthi i-Atlanta iyindawo ayefuna ukuba kuyo ngempela. Amehlo akhe ayethe njo eSavannah College of Art & Design ngakho-ke, wathengisa konke ayengakwenza, wahlanganisa izinsizakusebenza zakhe, wayohlala nomzala wakhe e-Atlanta njengoba ayelungiselela umsebenzi wegrad.
Yilapho yonke into yonakala khona.
“Ngithole umsebenzi eWaffle House futhi ngasebenza khona cishe izinyanga eziyisithupha ngaze ngahluleka ukuwuthatha,” kusho bona. “Ngibe sengingena ngandlela thile ekuhleleni lapha. Ngenze uchungechunge lwama-internship amafilimu nobudlelwano kusuka ekuhleleni kuye ekumaketheni kwedijithali kuye ku-PA-ing kumasethi wamafilimu. Lesi bekuyisinqumo esihle kunazo zonke ebengingazenzela sona, futhi ekugcineni bengifuna ukuba seduze kwabantu abamnyama abamnyama futhi i-Atlanta ibibukeka iyisizinda salokho. Ngakho-ke, sengineminyaka emithathu ngilapha futhi ngenza ama-movie. Ngizenza ukuthi ngifuna ukuzenza kanjani futhi nini. Konke ebengizimisele ukukwenza kwenzeke. ”
Lokhu kulethele u-ND Johnson okwamanje lapho abesebenza khona enza ifilimu esihloko sithi Ubumnandi ayisungula kusuka kwifilimu emfushane yobufakazi besicoco esifanayo esenza imizuliswano emikhosini okwamanje.
Ubumnandi ifiphaza imigqa yohlobo, ibhekene nobudlelwano phakathi kwamadoda nokudluliswa. Umqondo yilowo abenawo selokhu afunda ekolishi, kepha akakwazanga ukukufeza lokhu ngoba afunda nabo bebengeke bazinikele kwifilimu nasemlayezo wayo.
"Lo ngumsebenzi ocelwa ukuthi utshelwe, ikakhulukazi kumuntu obhekana nalolu daba kaningi empilweni yami," kuchaza uJohnson. “Ngifuna ukubona izinganekwane engingaziboni ngokwejwayelekile. Iningi lezinganekwane ezungeze ukudluliswa kwezezimali lisebenza kuphela ngezocansi kuphela noma ukulutha izidakamizwa noma ukuhlukunyezwa kwasekhaya nodlame lapho egcina efile ekugcineni noma badlala izidumbu ku Umthetho ne-oda ukuba nabesilisa abangama-cis-hetero bayabagwegwisa. ”
Ngenxa yalokhu, uJohnson uthi, okwamanje akadonswa ukuthi asebenze kuma-studio lapho abantu abaningi bethola khona izinqumo mayelana nokuthi ifilimu kufanele ibe yini nokungafanele ibe yini.
"Uma ngivumela istudiyo ukuthi sibeke isandla sami engozini yami, bazofuna ukuyishintsha," kusho yena. “Njengoba Ubumnandi, kuwumsebenzi okhetheke kakhulu kimi. Ngidale amaphrojekthi esikhathini esedlule lapho engangizitshela khona ukuthi ngeke ngikwazi ukuzwela ngakho. Uyinika abanye abantu ukudala umbono wabo. Uyibhalile nje. Angifuni ukwenza lokho ngalokhu. Lokhu okwami.
“Engifisa ukukubona ngabantu abamnyama abadlulayo ekubeni ngamaqhawe ethu endabeni yethu. Ngithanda intombazane yokugcina. Angiboni ukuthi kungani engeke abe mnyama futhi ahambise. Ngifuna ukubhekana nezinto esengibhekane nazo iminyaka. Kukhona ithani lobudlova lokuhamba nje ube ungubani njengowesifazane omnyama we-trans. Ngilandelwe ekhaya. Ngike ngabuzwa ezindlini zokugezela.
“Engingathanda ukukwenza kule filimu eyethusayo ukukhombisa ukuthi abantu benzani, kodwa futhi nokukhuthaza abanye abantu abadlulisa igazi ukuthi babheke ngale kwalokho. Ukuze ufunde ukuzivikela. Sifundiswe ukubheka emadodeni ukuze sivikeleke kepha uma kuyibo abangela ingozi yini okufanele siyenze? Lokho kukhanyisa uphethiloli. Ngifuna ukukuhlola okwengeziwe, kepha ekugcineni, kumayelana nokufunda ukuzinakekela. Lapho uba nezikhathi zokwesaba, uqinisekisa ukuthi ubona usuku olulandelayo. Maningi amantombazane angakakwenzi lokho. Ingxenye yalokho kungenxa yokuthi asikaze sifundiswe ukuzivikela. Ukulandisa okufana nalokhu kungasiza ekwakheni kabusha umhlaba. ”
Okuhlekisayo ukuthi, ngicabanga ukuthi u-ND Johnson usevele wenza lokho kanye. Ngeminye imininingwane mayelana Ubumnandi, ifilimu, CHOFOZA LAPHA.